Abụ e ji ekele Jehova (1-6)
“Jaa Jehova bụ ike m” (2)
12 Ị ga-asị n’ụbọchị ahụ: “Jehova, m na-ekele gị,N’ihi na ọ bụ eziokwu na ị na-ewesabu m iwe,Iwe gị adajụọla, ị kasiekwala m obi.+ 2 Chineke na-azọpụta m.+ M ga-atụkwasị ya obi. M gaghịkwa atụ ụjọ.+ N’ihi na Jaa* Jehova bụ ike m na ume m. Ọ bụ ya na-azọpụta m.”+ 3 Unu ga-eji aṅụrị sere mmiriN’isi iyi nke na-azọpụta mmadụ.+ 4 Unu ga-asịkwa n’ụbọchị ahụ: “Keleenụ Jehova. Kpọkuonụ aha ya. Kọọrọnụ mba dị iche iche ihe ndị ọ na-eme.+ Kpọsaanụ na aha ya dị ebube.+ 5 Bụkuonụ Jehova abụ otuto,+ n’ihi na o meela nnukwu ihe dị iche iche.+ Meenụ ka a mara ihe a n’ụwa niile. 6 Ndị bi na Zayọn, tisienụ mkpu ike, tiekwanụ mkpu ọṅụ,N’ihi na Onye Nsọ Izrel, onye unu na ya nọ, bụ onye ukwu.”